Sagantaan Tedii Afroo albamii sirbaa eebbisiisuuf qophaa'ee dhorkame - BBC News Afaan Oromoo
Sagantaan Tedii Afroo albamii sirbaa eebbisiisuuf qophaa'ee dhorkame
Sirni eebba albamii muuziiqaa Teedii Afroo bu'aa bahii heedduun booda Dilbata darbe raawwatamuuf karoorfame ture akka hin gaggeeffamneef dhorkamuun isaa barame. Sirnicha irratti akka hirmaataniif firoottoonni, leelsitoonni fi namoonni isa waliin hojjatan kuma 1 ta'aniif kaardiin waamichaa raabsamee kan ture yoo ta'u, gareen qopheessitootaa sagantichaaf gara Hoteela Hiltan wayita adeemaa turanitti meeshaa isaanii akka ol hin galchineef dhorkamuu isaanii dubbatu.
Dhaabbanni Jooyis Evantiis, Maxxansaa fi raabsaa albamichaa muziiqaa Teedii shanaffaa 'Itoophiyaa' jedhamuun beekamu irraa kan ta'e obboo Henook Tafarraa Wiixata Hagayya 29 bara 2009 bilbilaan BBC tti akka himanitti, hoteelichaaf bqarshiin miliiyoonni tooko akkasumas badhaasaa, sirbitoota affeeramanii fi qophiilee biraatiif maallaqni biraa illeen baasii taasifamu isaa dubbatanii jiru.
Sagantaa heeba albamichaa irra deebiin qopheessuu murteessuu ykn dhiisuuTeedii waliin marii'achuun torban dhufa keessa akka beeksisan illeen Obbo Heenook dubbataniiru.
Haa ta'u malee, konsartiidhaaf yoo ta'e malee sagantaalee akka heebba albamiitiif hayyamni gaafatamanii akka hinbeekne illeen dhaabbanni Jorkaa Ivantis jedhamu eeree jira.
Leellistoonni muziqeessaa kanaas haqamuu sagantichaa ilaalchisuun gadda isaanii miidiyaalee hawaasaa irratti ibsachaa jiru.
Haaluma walfakkaatunis, muziqeessaan kun waggaa haarawaa sababeeffachuun erga albamii isaa 'Itoophiyaa' jedhamuun baaseen booda galma walgahii Miliniyeemiitti qophii muziiqaa qopheessuuf karoorfatee Waajjira Kantiibaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetti, kutaan beeksiisa hayyama waligahii fi hiriira nagaa irraa hayyama argachuu dhabuun saganticha haquudhaaf dirqisiifamee ture.
Kanaafuu, gaaffiin maaliif Teeddii qofti dhorkamaa jedhuu yoo ka'e nama hin ajaa'ibu ta'a. Dhimmi Teedii namoota hedduutti gaaffii akka ta'u beekamaadha. A.L.A Bara 2008 dura yakka konkoolaataadhaan nama rukutee dhokachuudhaan itti murtaa'ee hidhamuun isaa ni beekama.
Maanaajara Teedii, Obbo Geetaachoo Maangudaayiin haasofsiisuun ragaa argameenis, hanga ammaattis poolisiin dhimmicha irratti waan jedhe omtu hin jiru. Kanuma qulqulleessufis yaaliin Poolisii Magaalaa Finfinnee dubbisuuf taasifne nuuf osoo hinmilkaa'in hafeera.